X3-A Warshada Boodhka Ururiya
CC Dabaqa Polisher
C5 xoqida sagxada
Furimaha Dagaalka dabaqa F0 waa qalab wax lagu shiido dhulka oo khaas ah oo loogu talagalay dhismo yar yar. Qalabku waa fudayd oo leh Furimaha Dagaalka sagxadda sare ee la qaadan karo, xariif u ah naqshadaynta oo ay fududahay in lagu shaqeeyo. Mashiinka si dhakhso ah ayaa loo kala diri karaa, markaa way ku habboon tahay in la qabto oo la raro.
Furimaha Dagaalka dabaqa F1 waa qalab wax lagu shiido dhulka oo khaas ah oo loogu talagalay dhismo yar yar. Qalabku waa fudayd oo leh Furimaha Dagaalka sagxadda sare ee la qaadan karo, xariif u ah naqshadaynta oo ay fududahay in lagu shaqeeyo. Mashiinka si dhakhso ah ayaa loo kala diri karaa, markaa way ku habboon tahay in la qabto oo la raro.
Furimaha Dagaalka dabaqa F2 waa qalab khaas ah oo dhulka lagu shiidi karo oo loogu talagalay dhismo yar yar. Qalabku waa fudayd oo leh Furimaha Dagaalka sagxadda sare ee la qaadan karo, xariif u ah naqshadaynta oo ay fududahay in lagu shaqeeyo. Mashiinka si dhakhso ah ayaa loo kala diri karaa, markaa way ku habboon tahay in la qabto oo la raro.
F1-R Furimaha Dagaalka
Furimaha Dagaalka dabaqa F1-R waa qalab khaas ah oo dhulka lagu shiidi karo oo loogu talagalay dhismo yar yar. Qalabku waa iftiin, xariif ahaan nashqadaynta waana sahlan tahay in lagu shaqeeyo. Mashiinka si dhakhso ah ayaa loo kala diri karaa, markaa way ku habboon tahay in la qabto oo la raro.
Furimahayaasha sagxada F2-R
Furimaha Dagaalka dabaqa F2-R waa qalab khaas ah oo dhulka lagu shiidi karo oo loogu talagalay dhismo yar yar. Qalabku waa iftiin, xariif ahaan nashqadaynta waana sahlan tahay in lagu shaqeeyo. Mashiinka si dhakhso ah ayaa loo kala diri karaa, markaa way ku habboon tahay in la qabto oo la raro.
Furimaha Dagaalka dabaqa F6 waa qalab wax lagu shiido dhulka oo xirfad leh oo loogu talagalay dhismaha aagga lage.
Waxay ku qalabaysan tahay matoor awood sare leh iyo qalabka xakamaynta xawaaraha soo noqnoqda si ay u buuxiso shuruudaha dhismaha dhul-shiidka ee ballaaran.
Furimahayaasha dabaqa F7
Furimaha Dagaalka dabaqa F8 waa qalab wax lagu shiido dhulka oo xirfad leh oo loogu talagalay dhismaha aagga lage.
F6-R Furimaha Dagaalka
Taxanaha Ololka F6-R ee wax shiidiyaasha sagxada hoostiisa astaanta Ares.
Furimaha Dagaalka dabaqa F6-R waa qalab wax lagu shiido dhulka oo xirfad leh oo loogu talagalay dhismaha aagga lage laga bilaabo sagxadaha xoqidda ilaa shubka iyo dhagaxa dabiiciga ah.
F7-R Furimaha Dagaalka
Taxanaha Ololka F7-R ee wax shiidiyaasha sagxada hoostiisa astaanta Ares.
Furimaha Dagaalka dabaqa F7-R waa qalab wax lagu shiido dhulka oo xirfad leh oo loogu talagalay dhismaha aagga lage laga bilaabo sagxadaha xoqidda ilaa shubka iyo dhagaxa dabiiciga ah.
F8-R Furimaha Dagaalka
Taxanaha Ololka F8-R ee wax shiidiyaasha sagxada hoostiisa astaanta Ares.
Furimaha Dagaalka dabaqa F8-R waa qalab wax lagu shiido dhulka oo xirfad leh oo loogu talagalay dhismaha aagga lage laga bilaabo sagxadaha xoqida ilaa shubka iyo dhagaxa dabiiciga ah.
X3 Warshadaynta siigada
Taxanaha Thunder X3 aruuriyeyaasha siigada warshadaha ee hoos yimaada astaanta Ares.
X3 faakuum nadiifiyaha warshaduhu waa qalabka lagama maarmaanka u ah shiididda dhulka iyo hagaajinta dhismaha.
Xiriirka ka socda
Qolka 505, No. 108, Yuyuan Road, Jing' an District, Shanghai
Nidaamyada dabaqa Ares ayaa bilaabay C6 - th...
F1-R - iftiin, xariif u ah naqshadeynta iyo ...
Mashiinka Waxshiidka Xawaaraha Sare, Soo saarista Kuraasta Baabuurka, Baabuurka shaambada faaruqinta, Mishiinka Shiida Geedaha, Mashiin wax shiida flat, Furimaha Dagaalka Dabaqa,